interview | San Oo Aung's Weblog
Interview2commanders US Navy ships & attache in Phuket
Posted on June 7, 2008 by sanooaung
Filed under: Blogging, Burma, Burmese, English Article, Human Rights, Myanmar, Myanmar Military, Politics, SPDC | Tagged: Burma, cyclone Nargis, interview, Myanmar, NBT, Thailand, US Navy |	Leaveacomment »
Mizzama interview with veteran politician Thakin Chan Tun (in Burmese)
Posted on April 18, 2008 by sanooaung
“တိုင်းပြည် ဂျွမ်းထိုးမှောက်ခုံဖြစ်သွားမယ်” (သခင်ချန်ထွန်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်)
Friday, 18 April 2008 13:02 – မြန်မာစံတော်ချိန်
ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး သခင်ချန်ထွန်းက စစ်အစိုးရ ရေးဆွဲထားသော အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်းကို ကန့်ကွက်မဲပေးရန် တိုင်းပြည်သို့ တိုက်တွန်း ပြောဆိုလိုက်သည်။ တပ်မတော်အနေဖြင့် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သော အချက်များကိုလည်း သံအမတ်ကြီးဟောင်း ဖြစ်သူက အကြံပြု တင်ပြထားသည်။ အမေး။ ။ အခြေခံမူကြမ်းအပေါ် ဘဘ အနေနဲ့ ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။
အဖြေ။ ။အခြေခံ ဖွဲ့စည်းပုံ မူကြမ်းထဲမှာ အဓိက မကြိုက်ဆုံးကတော့ တပ်မတော်က တိုင်ပြည်ကို ထာဝရ လက်ဝါးကြီး အုပ်ထားနိုင်ဖို့အတွက် လုပ်တဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်နေလို့ မကြိုက်ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် လွတ်တော်ကနေ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း စစ်ဦးစီးချုပ်ကနေ ရွေးပေးတဲ့သူတွေ ပါရမယ် ဆိုတော့ ဒါကိုက ဒီမိုကရေစီ အစဉ်အလာ မဟုတ်တာကြီး၊ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မရှိတဲ့ ကိစ္စမျိုး လုပ်ထားတော့ ဒါကြီးကို လုံးဝ ဘဘအနေနဲ့ မလိုလားဘူး။ မလုပ်အပ်ဘူး။ မလုပ်သင့်တာကို လုပ်တယ်။ အမှန်ကတော့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူထုကို စော်ကားတာပဲ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်း ဒီမိုကရေစီ အခြေခံကျတဲ့ အခြေခံဥပဒေကြီး ဆိုပြီးတော့ ပြောနေ ဆိုနေတာကိုက အင်မတန် အရှက်အကြောက် နည်းပါးစွာ ပြောတယ်လို့ ယူဆတယ်။ ဒီဟာကြီးကိုသာ လက်ခံလိုက်ရင် တိုင်းပြည်အနေနဲ့ ဂျွန်းထိုးမှောက်ခုံ ကျမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
သူတို့ ကြေညာချက်ထဲမှာ မေလတွင်ကျင်းပမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံမဲ ပေးဖို့ ဝေထားတဲ့ စာရွက်တွေ ဖတ်ရတယ်။ မဲဆန္ဒ မပေးဘဲနဲ့ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ခန့်တာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အမှန်ကတော့ တခြားစီပဲ။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ တခြားစီပဲ။ အခြေခံလွတ်တော်မှာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ တက်တာတွေ အခုမှာ ဒီလို တိုက်ရိုက်ခန့်တာတွေ၊ ဘယ်သူက ခန့်လို့ အလိုအလျှောက် လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မပါဘူး။ အရှက်အကြောက် ကင်းစွာဖြင့် မဲပေးအောင် ထောက်ခံမဲပေးအောင် ၁၆ မျက်နှာပါတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ လိုက်ဝေနေတာနော်။ အဲဒါကို ဖတ်ခြင်းအားဖြင့် စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်သွားရတယ်။ မဟုတ်တရုတ် အရှက်မဲ့စွာ သူတို့ရေးရဲတယ်။ မျက်နှာပြောင် တိုက်ရဲတယ်လို့ ဘဘအနေနဲ့ မြင်ပါတယ်။
နိုင်ရင်ကတော့ ၂ဝ၁ဝ မှာ အခြေခံဥပဒအရ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါက ၂ နှစ်လောက် အချိန်ယူပြီးတော့ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ အဲဒီဟာမှာလည်း ရှုံးရင် ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ မပါဘူး။ လူထုက တခါတည်း အသေ တွက်ထားတယ်။ ဒါကို လူထုက လက်ခံမယ်၊ အတည်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့ သဘော သက်ရောက်အောင် လုပ်နေတယ်။
ပြဿနာတခု ကြိုက်တဲ့လူရှိတယ် မကြိုက်တဲ့ လူရှိတယ်။ မကြိုက်တဲ့ လူကလည်း ဘာကြောင့် မကြိုက်သလဲဆိုတာကို ပြောနိုင်ရမယ်၊ ပြောခွင့် ရှိရမယ်။ ကြိုက်တဲ့ လူကလည်း ဘာကြောင့် ကြိုက်တယ် ဆိုတာပြောရမယ်။ ကိုယ်ကတော့ ၁၆ မျက်နှာ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ် ဆိုတာကို ပြောပြီးတော့ မဲရုံးကို သွားပါ ထောက်ခံမဲပေးပါ ဆိုပြီးတော့ ပြောတယ်။
အဖျက်သမားတွေရဲ့ အန္တရာယ်ကို ပြည်သူတရပ်လုံးက နေပြီးတော့ သတိ၊ ဝီရိယဖြင့် ဖယ်ရှား တွန်းလှန်ကြပါစို့ ရေးထားပြီးတော့ ဝေငှနိုင်တာ ဝေငှနေတာဟာ ကျန်တဲ့ ပြည်သူတရပ်လုံးကို ငါတို့ပြောချင်တာ ပြောမယ်။ ငါတို့လုပ်တာကို လက်ခံ ၊ ငါတို့လုပ်တာကို ထောက်ခံဆိုတဲ့ သဘောမျိုး သက်ရောက်နေတယ်။
အလျော်သင့်မြတ်တဲ့ ကိစ္စတွေလုပ်နေတယ်လို့ မြင်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေက ၁၉၃၄- ၃၅ ခုနှစ်တုန်းက နာဇီပါတီ ဂျာမဏီကြီးစိုးနေချိန်မှာ အဲဒီ ပါတီဝင်တွေက လိုက်ပြီးတော့ သူတို့ အတိုင်အခံလုပ်တဲ့ သူတွေကို လိုက်ပြီးတော့ ရိုက်ပုတ်သတ်ဖြတ်တာတွေ လုပ်နေသလို မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်လာတာကို မြင်နေ ကြားနေရတယ်။ အဲဒါတွေက အင်မတန် စိတ်ဆင်းရဲစရာ၊ စိတ်မချမ်းသာစရာ ဖြစ်နေတယ်။
ဒါမျိုးတွေဟာ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် ဘာမှ အကျိုးမရှိပါဘူး။ မြန်မာပြည်သူတွေက ရေစုံနစ်ရမဲ့သဘော ဖြစ်နေတယ်လေ။ ဒီဟာကိုတော့ လုံးဝ မထောက်ခံနိုင်ဘူး။ ဒါကို ကန့်ကွက်မဲ ပေးရမှာပဲ။
အမေး ။ ။ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေကို ဘဘအနေနဲ့ ဘာပြောချင်ပါသလဲ ဘဘ။
အဖြေ။ ။ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကို မေတ္တာ ရပ်ခံချင်တာကတော့ ဒီဟာကြီးကို လူထုက ပယ်ချလိုက်ရင် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ မပါဘူး။
ဒီဟာအတွက် လုပ်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဘဘ အနေနဲ့ အကြံဥာဏ်ပေးချင်တာကတော့ အားလုံး ပြည်သူလူထုက လက်မခံဘူး ပယ်ချလိုက်လို့ရှိရင် ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပါတီတွေ၊ ပြည်သူလူထု အားလုံးက ၈၂ ရာခိုင်းနှုန်းနဲ့ ထောက်ခံခဲ့တဲ့ NLD က ကိုယ်စားလှယ်တွေရယ်၊ လူမျိုးစုက ကိုယ်စားလှယ်တွေရယ် ခေါ်ပြီးတော့ ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရ တပ်မတော်က ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ အစိုးရထဲမှာ ထည့်ဖွဲ့ပြီးတော့ ပယ်လိုက်တဲ့ အခြေခံ ဥပဒေတွေကို ဘာတွေ ပယ်ချင်တယ်၊ ဘာတွေ ဖြည့်စွက်ချင်တယ် ဆိုပြီးတော့ အပြန်အလှန် အပေးအယူနဲ့ သေသေခြာခြာ ဆွေးနွေးကြစေချင်တယ်။
တဖက်မှာကလည်း တိုင်ပြည်က တကယ်ကို အောက်ကျနောက်ကျ နိုင်နေတယ်။ ထိုင်း၊ မလေးရှား နိုင်ငံခြားမှာ သွားအလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူတွေက ဟိုကျတော့ နွားလိုဝက်လို ဆက်ဆံ ခံနေရတာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီလို ဘဝမျိုးက လွတ်အောင် အစိုးရက စီးပွားရေးတို့ ၊ ပညာရေး၊ ကျန်မားရေးတို့ကို ညွှန်းပေါင်း အစိုးရက လုပ်သွားရင်းနဲ့ တဖက်က အခြေခံဥပဒေကို ဆွေးနွေးသွားဖို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။
အားလုံး ပြေလည်လာတဲ့ အခါမှာ ၁၉၉ဝခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်လာတဲ့ လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တွေကို လွတ်တော် ခေါ်ပေးပြီးတော့ လွတ်တော်ကနေပြီးတော့ သူတို့သုံးဦး သုံးဖလှယ် သဘောတူ ရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေကြမ်းကြီးကို စဉ်းစားပြီးတော့ အတည်ပြုပေးပါ ဆိုပြီးတော့ လွတ်တော်ကို ခိုင်းရမယ်။ ဒီလွတ်တော်က နေပြီးတော့ ဒီဥပဒေကို အတည် ပြုပေးရမယ်။
အာဏာရှိတွေရော အာဏာမဲ့တွေရော မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်တာတွေ ရှိတယ် ဒီလိုဟာတွေအတွက် တချို့က စိုးရိမ် ကြောင့်ကြတာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီအတွက် အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ဆိုတဲ့ အမိန့်ကို ထုတ်ပြီးတော့ ဒီလွတ်တော်ကနေ ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ရမယ်။
အဲဒီလို ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက် အခြေခံ ဥပဒေကိုလည်း အတည်ပြုပြီးရင် ညွှန်းပေါင်းအစိုးရက ဒီလွတ်တော်ကြီးကို ဖျက်သိမ်းပြီးတော့ သူတို့က သတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အခြေခံ ဥပဒေအရ ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကို လုပ်ရမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ အသစ် ရလာပြီဆိုတဲ့ အခါမှာ အနိုင်ရတဲ့ ပါတီကို အာဏာ အပ်နှင်းပြီးတော့ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ်ဘားတိုက်ကို၊ စစ်တန်းလျားကို ပြန်ကြဖို့နော်၊ ကျန်တာကတော့ အဲဒီ အစိုးရနေ ဆက်အလုပ် လုပ်သွားဖို့ လိုတယ်ပေါ့နော်။
၁ နှစ် ကြာရင်လည်း ကြာမယ်။ ၂ နှစ် ကြာရင်လည်း ကြာမယ်ပေါ့။ အပြန်အလှန် အလျော့အတင်းနဲ့ စနစ်တကျလုပ်ရင် မြန်မာနိုင်ငံအဖို့ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရပြီးတော့ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ချမ်းသာတဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကြီး ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။
ဘဘ အနေနဲ့ကတော့ အစဉ်အလာ မရှိတဲ့ လက်ရှိ အခြေခံ ဥပဒေမူကြမ်း၊ ကမ္ဘာမှာ အစဉ်အလာမရှိတဲ့ ဘာမှာ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ချင်း မဟုတ်ပဲနဲ့ တပ်မတော် စစ်ဦးစီချုပ်ကနေ ရွေးချယ်ပေးတဲ့ ၂၅ ရာနှုန်း ပါရမယ် ဆိုတော့ အဲဒါ အဓိကပဲ။ ဘဘ အနေနဲ့ကတော့ ကန့်ကွက်မဲပေးမှာ ဖြစ်တယ်။
အမေး။ ။ ဘဘ အနေနဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ပြည်သူလူထုကို ဘယ်လို တိုက်တွန်းချင်ပါသလဲ။
အဖြေ။ ။ မဲပေးတဲ့ အခါမှာ ကြက်ခြေခတ်တာနဲ့ အမှန်ခတ် နှစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါကို ကြိုက်ရာလေး ရေးရမယ်။ အဲဒါကို ကြက်ခြေခတ်ပြီးတော့ အခြေခံဥပဒေကို ကန့်ကွက်ဖို့၊ ကန့်ကွက်မဲ ပေးဖို့ဘဲ ဖြစ်တယ်။ လူငယ်တွေ တော်တော်များများက သင်္ကြန်တွင်းမှာ ကြွေးကြော်တာတွေ သူတို့ တတ်နိုင်သလောက် စာရွက်စာတမ်းတွေ ဝေတာတွေ ရှိတယ်။ လူငယ်တွေ အနေနဲ့ကတော့ သတ္တိရှိတယ်၊ ဇွဲရှိတယ်၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်တယ်။ လူငယ်တွေကတော့ မကြောက်ကြဘူး။ သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်၊ ခံစားချက်ကို သတ္တိရှိရှိ ပြသနေတယ်။ ပြည်သူအနေနဲ့ သတ္တိရှိရှိ လုပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ဘဘ မြင်ပါတယ်။
အမေး။ ။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံမူကြမ်းကို စစ်အစိုးရ အနေနဲ့ အာဏာသုံးပြီးတော့ ပြည်သူလူထုကို အဓမ္မ အာဏာသုံးပြီးတော့ လုပ်နေတဲ့ အပေါ် ဘဘ အနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
အဖြေ။ ။ ဒါကတော့ မလုပ်သင့်ဘူး ဆိုတာကိုပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ အခုဟာက ကြိုတင် မဲပေးရမယ် ဆိုပြီးတော့ တချို့ ဝန်ထမ်းတွေကို မဲပေးခိုင်းတာတွေ ရှိတယ်။ ကျောက်ပန်းတောင်း၊ ညောင်ဦး၊ ရေနံချောင်းလို နေရာမျိုးတွေမှာ ကြိုတင် မဲပေးရမယ်လို့ ဝန်ထမ်း မိသားစုတွေကို ခိုင်းနေတာမျိုးတွေ ကြားနေရတယ်။ ဝန်ထမ်း မိသားစုတွေကို သီးခြား မဲပုံးထဲမှာ မပါတော့ဘူး။ အဲဒါဆိုတော့ ထောက်ခံမဲပဲ ပေးရမယ်၊ ကြက်ခြေ မခတ်ရဲတော့ဘူး။ ဒီလို ဖြစ်အောင် လုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါက မဟုတ်တာပဲ၊ လူတွေဒီမှာ ရှိနေတာပဲ။ လူတွေက မဲရုံကို သွားပြီးတော့ ကြိုက်တာကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ဖို့ သင့်တာပေါ့။
အမေး။ ။ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတို့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ကို မဲ ၃-၄ မဲ ပေးရမယ်လို့ ကြားနေတဲ့ အတွက် ဘဘ အနေနဲ့ အဲဒါနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။
အဖြေ။ ။ ကမ္ဘာမှာ ဘယ်မှာမှ မရှိတာဘဲ ။ အဲဒီလို လုပ်တာက ညစ်ဖို့ လုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်။ အခုကတည်းက ညစ်ဖို့ မတရားအနိုင်ယူဖို့ လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ လူတွေကတော့ ညိမ်မနေပါဘူး။ ကန့်ကွက်ကြမှာပဲ။ ကမ္ဘာက အခုကတည်းက မယုံသင်္ကာ ဖြစ်နေကြတာကို၊ လက်ရှိ တပ်မတော်အစိုးရ အနေနဲ့ ဘယ်လောက် တရားမျှတတယ်ဆိုတာ ပါကစ္စတန်က ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်သွားတယ်။ နိုင်ငံခြားသား ၅ဝဝဝ ကျော် သွားရောက် လေ့လာခွင့် ပေးထားတယ်။ နီပေါ မှာလည်း အဲဒီလို ပုံစံမျိုး လုပ်ထားတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံက တနှစ်အတွင်းမှာ အာဏာ သိမ်းတယ်၊ သိမ်းပြီးတော့ အခြေခံ ဥပဒေကို ဆွဲပြီးတော့ လူထုဆန္ဒ ခံယူပွဲ လုပ်ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တယ်။ သူကတော့ သူနိုင်ငံအတွင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ ဝင်ထွက် သွားလာနိုင်ဆိုတော့ လူတွေက ကြောက်စရာ မလိုဘူး။ မယုံင်္ကာ ကင်းရှင်းသွားအောင်လို့ အားလုံး လေ့လာခွင့် ပေးထားတာ ဖြစ်တယ်။ လေ့လာတဲ့သူတွေ အကုန်လုံးက တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ထောက်ခံတဲ့ အတွက် ကမ္ဘာက လက်ခံတယ်။
ကမ္ဘာက လက်ခံနိုင်အောင် လက်ရှိ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေက ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကို လာပြီး လေ့လာကြပါ ဆိုပြီးတော့ ဖိတ်ခေါ်သင့်တယ်။ နိုင်ငံအသီသီးမှာ ရှိတဲ့ သတင်းထောက်တွေ၊ မီဒီယာတွေကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်သင့်တယ်။ ဘယ်လောက် ရွေးကောက်ပွဲက တရားမျှတတယ်၊ လွတ်လပ်တယ် ဆိုတာကို သူတို့မြင်တဲ့ အမြင့်တွေ ရေးနိုင်တယ်။
ကိုယ့်ကြိုက်သလို ကြံ့ခိုင်းရေးတို့ မီးသတ်တို့ ဝန်ထမ်းတွေလို ရဲတို့ ခြိမ်းခြောက်ပြီးတော့ လူထုကို လုပ်တာတွေ၊ ဘာတွေက အခုကတည်းက ရှိနေတယ်ဆိုတော့ နောက်ဆို ပိုပြီးတော့ ရှိမှာပေါ့။ ဒါတွေကို ရှိအောင်လူထုက ပြောရဲ ပြောတတ် ပြောနိုင်ပြီးတော့ မီဒီယာက အိုင်ဒီ ကမ္ဘာရွာကြီးက သိပ်ကို တိုးတက်နေတယ် ဆိုတော့ ဘာမှ ဖုံးထားလို့ ဝှက်ထားလို့ မရပါဘူး။ မရတော့ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို လုပ်ပေးတယ် ဆိုတာ ဖြစ်အောင် တရားမျှတတဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲကြီး ဆိုပြီးတော့ ကမ္ဘာကသိအောင် ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂက နေပြီးတော့ နိုင်ငံအသီးသီးမှာ လေ့လာသူတွေကို လေ့လာချင်ရင် လေ့လာခွင့် ပေးဖို့ ဘဘအနေနဲ့ အစိုးရကို တိုက်သွန်းချင်တယ်။
အမေး ။ ။ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားများ (ပြည်ထောင်စု-မြန်မာနိုင်ငံ) ဆိုတဲ့ အဖွဲ့တွေက နယ်တွေမှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုကို ထောက်ခံမဲ ပေးဖို့ အမှန်ခြစ်ဖို့ စည်းရုံးနေတယ်။ သူတို့တတွေက တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက် ကောင်းအောင် လုပ်နေတာလား၊ ပြည်သူလူထု နစ်နာအောင် လုပ်နေသလားဆိုတာ ဘဘ အနေနဲ့ ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။
အဖြေ။ ။ ကိုယ်ကျိုး၊ ကိုယ့်စီးပွား ကြည့်ပြီးတော့ လုပ်နေတဲ့ သူတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုလုပ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မော်တော်ကား ရနိုင်တယ်။ အိမ်ခန်း ရနိုင်တယ်။ မြေကွက် ရနိုင်တယ်။ ဖုန်း ရနိုင်တယ်။ ဒီလို အခွင့်အရေးတွေ မျှော်ကိုးပြီးတော့ လုပ်နေတယ် ဆိုတာကို ကြားနေရတယ်။ ဒါတွေကလည်း ဖြစ်နိုင် ဆိုပြီးတော့ ပြောတယ်။ သူတို့ ခံစားနေတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ လူတွေ ပြောနေတဲ့ စွတ်စွဲချက်တွေ မှန်ကန်လို့ ယူဆပါတယ်။ သူတို့ အခွင့်အရေး မပေးပဲနဲ့ လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တပ်မတော်လည်း မဟုတ်ဘူး။ စွမ်းအားရှင်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ကြံ့ခိုင်းရေးလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ သတ်သတ် နာမည်အမျိုးမျိုး တပ်ပြီးတော့ လုပ်နေတာဟာ အခွင့်အရေးရလို့ လုပ်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ဘဘအနေနဲ့ သဘောထားပါတယ်။
ဂျာမဏီက ဟစ်တလာ နာဇီပါတီလုပ်သလို ဒီမှာက အစပျိုး လုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်။ ရိုက်တာလို့ ဖမ်းဆီးတာ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ဒီလို ပြင်းထန်တာ ဖြစ်လာရင်တော့ ကမ္ဘာက ကြည့်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုတောင်မှာ ကမ္ဘာက ပြောလာပြီလေ။ အဲဒီလို လုပ်တာတွေ မကောင်းဘူးလို့ ပြောနေပြီးလေ။ ကိုယ့်နိုင်ငံ တခုပဲ နေတဲ့ခေတ် မဟုတ်ဘူးလေ။ ကမ္ဘာ့ရွာကြီးတဲ့မှာ နေတယ်ဆိုတော့ အရပ်တခု အနေနဲ့နေတာ ဆိုတော့ စောင့်နေတာ၊ ကိုယ်တယောက်ထဲ ကိုယ့်နိုင်ငံ တခုတည်းနေတာမှ မဟုတ်ဘဲ၊ အလောင်းမင်းတရားခေတ်မှာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒီခေတ်မှာ လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့ မရဘူးဆိုတာ သူတို့ သိလာရမှာပေါ့။
Filed under: Blogging, Burma, Burmese, Human Rights, Myanmar, Myanmar Military, Politics, SPDC | Tagged: interview, Mizzima, referendum, Thakhin Chan Tun |	Leaveacomment »
The Role of Muslims in Burma’s Democracy Movement (Burmese translation)
Posted on December 19, 2007 by sanooaung
The Burmese translation of English article,
“The Role of Muslims in Burma’s Democracy Movement”
By Shah Paung in Irrawaddy magazine,
Filed under: Blogging, Buddhism, Burma, Burmese, Burmese Article, Burmese History, Burmese translation, Democracy, Democratic activists, History, Human Rights, ICC, Individual Freedom, interview, Islam, Islam in Myanmar, Justice, Law, Loving kindness, Minority Races, Myanmar History, Myanmar Military, Politics, prayers, Religion, Than Shwe | Tagged: Burma, Dreams, History, interview, Myanmar, Politics, Rule of Law |	Leaveacomment »
Dream Interview with DSAI Part IV
Dream Interview with DSAI
BURMA DIGEST: Dear Datuk Sri, thank Your Honour for allowing to continue interviewing you in my day dreams. Let’s continue the topics we were discussing in the last article. Is poverty the cause of lack of Human Rights?
H. E. Datuk Sri Anwar Ibrahim… Yes, I agree with you. I noticed that we should discuss in detail about the relations of poverty and the lack of Human Rights.
Poverty isacause andaproduct of human rights violations. It is this double edge that makes poverty probably the gravest human rights challenge in the world. The links between human rights and poverty are obvious :
1. People whose rights are denied — victims of discrimination or persecution, for example — are more likely to be poor.
2. Generally they find it harder or impossible to participate in the labour market and have little or no access to basic services and resources.
3. Meanwhile, the poor in many societies cannot enjoy their rights to education, health and housing simply because they cannot afford them.
4. And poverty affects all human rights: for example, low income can prevent people from accessing education — an “economic and social” right –
5. which in turn inhibits their participation in public life —a“civil and political” right — and their ability to influence policies affecting them.
6. Yet, poverty is still rarely seen thought the lens of human rights. Rather it is often perceived as tragic but inevitable, and even as the responsibility of those who suffer it. At best those living in poverty — countries and individuals — are portrayed as unfortunate, at worst as lazy and undeserving.
7. The reality is different. Many ingredients go into making poverty, but factors like discrimination, unequal access to resources, and social and cultural stigmatization have always characterized it.
8. These “factors” have another name: the denial of human rights and human dignity. What’s more, these are factors governments and those inaposition of authority can, indeed are obliged to, do something about. The realization of human rights – including the fight against poverty — isaduty, notamere aspiration.
Question… Burmese famous poet U Ti Moe said_“Military rule is likeaPlitical HIV/AIDS”. Do you agree Datuk Seri? Recently Video tapes of wedding of the Senior General Than Shwe’s daughter, was even shown on BBC and CNN. There are news that she got about US Dolar 50 million What will happen if there isatrue democracy?
Answer… In the full democracy countries, it would sound the alarm bells in all the branches of administration, judiciary and should becomeajucy news for the independent media to startarelentless attack and investigative journalism. But in Myanmar there maybeadeafning silence.
In any full democracies or even in flawed democracies and the hybrid regimes (except for the authoritarian regimes like present SPDC Military Regeme) such serious corruption by the top leader ofacountry would have caused instant public uproar, with the mass media relentlessly pursuing the culprit and law enforcement agencies such as the anti-corruption agency, Special Branch, attorney general and the respective police moving in to investigate and prosecute. Such series of events will definitely lead to the resignation of the culprit or the corrupt politician, followed by open prosecution. If there isaundeniable video evidence as you said, there is no alternative but to resign gracefully for the corrupt leader.
Question…Datuk Sri, how do you see the future “Guided or Disciplined democracy” under the doctrine of “Permanent dominance of Myanmar Military”.
Answer… In all the countries around the world, even civilian Defense Ministers are always placed above the whole Military i.e. above the top Generals or Chief of Staff.
1. Military are the arms and legs of the people trained to fight, kill, defend and obey the people and the country. They should not be the masters or leaders of the country. 2. Politicians people had chosen to represent them are the brain or the persons to lead and decide for every thing.
3. The Military Personals are taught to just obey the orders.
4. So even to start or stop the war, politician civilian leaders have to decide.
5. The Senior Generals’ view must be taken into consideration but they must obey the civilian government’s orders.
6. Nevertheless, after all, even the Democratic Governments must be regarded to be employees of the people, elected and given salary to govern the country as the people’s reprensentatives.
7. Military leaders and even Democratic Government Leaders must stop thinking and behaving like the masters of the people.
8. I could not see any chance of transforming to real and meaningful participatory democracy when:
25% of he seats are reserved for Myanmar Military. And they wrote in the constitution that
the President must have 15 years of military experience and
Defense Minister’s status is equal to the Deputy President.
The Myanmar Generals are actually planning for the total and permanent dominance of the military in their so called “guided democracy”
They even want to legalize the future military coups as their legimitate rights given by the people enshrined in the constitution.
9. So the future role of ordinary Burmese Citizens are sure to be degraded to just confirming or approving the showcase of sham elections not unlike the elections under communists and dictators.
10. The SPDC is going to stream-rolled the so-called seven steps to democracy with their tanks.
Burma Digest: Thank you very much Datuk Sri for the chance to have this dream interview. Do you wish to say any thing as an advise to Burmese people or the SPDC?
H. E. Datuk Sri Anwar Ibrahim…Well, Although I amaMuslim, I used to readalot on all the religions of the world. It may be appropriate if I used this saying which is well known amongst Burmese Buddhists.
We avoid charity because we are poor?
Or are we poor because we refrain from charity?
I hope you all know the answer.
Human Rights and poverty are also related.
We need to ask whether we should be denied of the Human Rights because we are poor?
Are we continue to stay in poverty because we are denied of our Human Rights?
I strongly believe and pray that all the Burmese citizens could haveachance to taste the political freedom, socio-economic progress, wealth and could enjoy all the Human Rights and Individual Freedoms inavery near future.
Burma Digest: Thank you.
Filed under: Anwar Ibrahim, Burma, Dream, Poverty | Tagged: Anwar Ibrahim, Day dream, Human Rights, interview, Malaysia, Myanmar, Poverty, SPDC |	Leaveacomment »
Dreaming an interview with DSAI or Datuk Sri Anwar Ibrahim Part II
Posted on December 2, 2007 by sanooaung
Dreaming an interview with
DSAI or Datuk Sri Anwar Ibrahim
Beware this is just fictional, not real.
Many Malaysians affectionately referred Datuk Sri Anwar Ibrahim as DSAI. I have this unusual dream of gettingachance to haveaface-to-face interview with DSAI. I hereby wish to apologize Datuk Sri Anwar Ibrahim, his family and the political party from the bottom of my heart for dragging DSAI’s name in my dreams and this article as it was never materialized or happened in the real world.
BURMA DIGEST: Dear Datuk Sri, let’s continue with our dream interview.
His Excellency Datuk Sri Anwar Ibrahim… OK. But be careful, don’t forget that you are welcome in your dreams only but not mine.
Question…Datuk Seri, could you explain about the Civil Rights for Burmese/ Myanmars?
Answer… I would like to highlight some of the Civil Rights that should be allowed by SPDC on Burmese People.
Burmese People should be allowed to openly question and discuss all of the official government policies including the present National Convention without fear or threat of prosecution with jail sentences.
The SPDC government must allow Burmese citizens to demonstrate their will or grievances peacefully.
Now they are jailed for peaceful political activities.
a. Daw Aung San Suu Kyi and NLD leaders,
b. U Khun Tun Oo and Shan leaders,
c. U Win Tin and other journalists,
d. Min Ko Naing and Student leaders,
e. people who distribute UN Declaration of Human Rights,
f. Su Su Nwe and others who complaint of the forced labour,
g. The honorary consul general for Scandinavian countries, Mr Nichols was jailed for using unregistered FAX MACHINE and was believed to be murdered in the jail.
4. SPDC is not seen to be relaxing the restriction on all the Civic associations and political organizations.
They must be allowed to freely organize, mobilize, and advocate their views if the Myanmar Generals want to claim that they are democratic.
The above examples above shown that there is no civil right and individual freedom under SPDC Government.
Question…Could you kindly elaborate about the Good Governance free of Corruption for Burma?
Answer… SPDC need to completely reform or revamp the Political, Civil, Human Rights & Economic situations before they could claim to be walking the corridors of democracy and announcing that they are practicing good governance.
Police & Military must be under the control of civilian elected politicians.
SPDC government’s decision-making must be transparent and must allow the public scrutiny.
The present and future elected officials in the Government and civil servants must be held accountable for their actions.
The government must be responsive to the public complaints and grouses.
SPDC must grant the Freedom of speech for all the citizens and all the media.
Under the successive Myanmar Military Governments of BSPP, SLORC and SPDC there is NO FREEDOM AFTER SPEECH. One would be definitely arrested, charged inaKangaroo Military subservient Court and given long term sentences in Myanmar.
Freedom of association for all the citizens, organizations including the opposition parties. Various Religious & Political organizations must be permitted to form, organize and active freely.
SPDC must change toaTrue full democracy but not the guided or disciplined democracy or the corrupted flawed nor hybrid democracies.
There must be Separation of Powers between the Legislative (Parliament), Administrative (Government) and Judiciary.
SPDC must allow independent free media allowing investigative journalism allowing to probe the Government officials and Government Servants. It must be Independent, competitive, non-monopolized, media, free from government censorship or editorial restrictions.
Allowing to set up the independent Anti Corruption Agency.
The right of self-determination for each and every citizen, irrespective of race, religion, creed, colour, gender etc. That means we all have to agree for the Rights of all the Ethnic Minorities and all the Religious Minorities.
There must beastrong and firm Non-discrimination by Governments, individuals or organizations on the basis of race, nationality, colour, religion, gender, marital status, political belief or affiliation, physical or mental disability.
There must be The Rule of Law; but not the Rule by Law as practiced by successive Military Governments, Ne win’s BSPP, SLORC and SPDC. And that Law must be fair and practice justice on all the citizens without any discriminations.
No one must be allowed to stay above the law or allowed to break the law. The LAW or JUSTICE must be BLIND.
There must be the presumption of innocence until proven guilty;
Trial by jury of peers.
The right toafair trial with appeal rights.
The right to adequate & independent legal representation
Not only there must be fair and justice but it must be seen that there is fairness and justice.
22. SPDC must set up the antitrust legislature to control the monopoly in each and every field.
23. People must have the power to monitor and record at the distribution of wealth and opportunity among the different groups depending on race, religion and political alignment.
24. People must have the power to monitor and record the Political patronage- awarding government contracts, appointments, promotions, scholarships, land distributions, permits etc.
25. SPDC must take care of the Rural development and the Urbanization, squatter relocation and settlements must be properly planned
26. SPDC must take care of the Basic infra-structure facilities, water, electricity, highways, telephone, multimedia facilities must be taken care of for the benefit of all the citizens.
27. I wish to quote Thomas Jefferson_
Filed under: Anwar Ibrahim, Democracy, democratization, Dream, English Article, Ethnic Minorities, Human Rights, Individual Freedom, Justice, Law, Loving kindness, Minority Races, Myanmar, Myanmar Military, Politics, SPDC | Tagged: Anwar Ibrahim, Burma, Dreams, DSAI, Good Governance, interview, Malaysia |	1 Comment »
Virtual interview with US Secetary of state Condoleezza Rice
Posted on October 16, 2007 by sanooaung
Filed under: Burma, Burmese, Burmese Article, Burmese translation, Myanmar, Myanmar Military, Politics, SPDC, USA | Tagged: Burma, Dictators, interview, Military Junta, Myanmar, SPDC, US Secetary of state Condoleezza Rice |	Leaveacomment »